Monterey County miasa mankany amin'ny faharetana
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Monterey County miasa mankany amin'ny faharetana
Monterey County fizahantany dia miresaka momba ny plastika sy ny fandrefesana ny fandrosoana maharitra ho toy ny dingana manakiana.
Ny fivoriana sy ny hetsika dia orinasa lehibe ao amin'ny Monterey County, izay toerana haleha noho ny aingam-panahy sy ny fanavaozana.
Ny Birao Fivoriamben'ny Vondrom-paritry ny Monterey sy ny mpitsidika (MCCVB) dia nanatevin-daharana hetsika roa izay hampivoatra ny tanjony hiantohana Monterey County dia iray amin'ireo tanjona maharitra eto an-tany amin'ny alàlan'ny fametrahana tanjona fatra-paniry laza sy fandrefesana ireo fiantraikany maharitra.
Ny voalohany dia ny Posititive Impact, eran-tany fa tsy mitady tombony izay misy hanomezana fotoana fanabeazana sy fiaraha-miasa hamoronana indostria hetsika maharitra - ary vina hiatrehana ny andraikitry ny plastika amin'ity indostria ity. Ny MCCVB dia mpiara-miombon'antoka amin'ny toerana mahomby amin'ny Positive Impact amin'ity tetikasa ity izay efa nahatafiditra fiaraha-miasa amin'ny fikambanan'ny Firenena Mikambana maromaro ary amin'ny lohataona 2019 dia hahita ny famoahana fitaovana hanampiana ny indostria manerantany hamantatra sy hahatakatra ny andraikitry ny plastika.
"Ny MCCVB dia efa mametra ny fetra ho an'ny fizahan-tany tompon'andraikitra ary amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fikambananay dia mandray andraikitra amin'ny sehatry ny fivoriambe rehetra izy ireo," hoy i Fiona Pelham, tale jeneralin'ny fiantraikany tsara. Nanampy izy hoe: "Ny fahazoana antoka ny andraikitry ny plastika izay hitarika amin'ny famongorana azy amin'ny fivoriana ho avy sy ny tontolon'ny fihaonambe dia tanjona lehibe, saingy zava-dehibe izany ary ny fiaraha-miasa toa an'io miaraka amin'ny Monterey County no vato manorina fiaraha-miasa ilaina hahatratrarana izany. "
"Ity fiaraha-miasa ity dia mifanaraka tanteraka amin'ny lova navelany," hoy i Tammy Blount-Canavan, filoha sady CEO an'ny MCCVB. "Ny toekarentsika fizahan-tany dia mitrosa ny zava-boahary eto amintsika, ary noho izany ny fanaovana izany dingana feno fahasahiana izany dia miantoka ny fiarovana bebe kokoa ny tontolo iainantsika ary mampiseho hatrany ny fanavaozana ny faritra misy antsika.
Ny fandrefesana fahombiazana dia manakiana ihany koa amin'ny iraka ataon'ny MCCVB. Nanatevin-daharana ny hetsika Global Destination Sustainability Index (GDS-Index) ny fikambanana, fiaraha-miasa mifantoka amin'ny fanampiana ny toerana itodiana, biraon'ny fivoriambe ary ny orinasa hampiroborobo ny fomba maharitra. Ny GDS-Index dia manao izany amin'ny fandrefesana sy fampitahana ny paikady maharitra, ny politika ary ny fahombiazan'ny toeran'ireo mpandray anjara ary amin'ny fizarana fanao tsara indrindra manerantany.
Ny GDS-Index dia namoaka ny fanadihadiana isan-taona momba ny toeran-kaleha manerantany amin'ny fivoriana fanao isan-taona any amin'ny International Congress & Convention Association (ICCA) any Dubai tamin'ny Novambra. Monterey County dia nahazo isa 52% tamin'ny indrafo faharetana ao ambadik'i Genève sy mialoha ireo tanàna amerikana toa an'i Washington, DC ary Houston. Ny isa dia mamela ny MCCVB hametraka mari-pahaizana ary hanatsara ny taona ho avy.
"Amin'ny farany, ny fiarovana ny toerana alehantsika dia zava-dehibe toy ny fampiroboroboana azy", hoy i Rob O'Keefe, Chief Marketing Officer an'ny MCCVB. "Ireo fandraisana andraikitra ireo dia mandray anjara amin'ny fahaizantsika maharitra mandritra ny fotoana maharitra ho toerana fizahan-tany farany ambony ary tena ilaina amin'ny fifandanjana tadiavinay hifamatotra eo amin'ireo mpivahiny mitsidika sy ireo mponina izay miantso ny faritry ny faritra mahafinaritra anay."
Ireo fiaraha-miasa farany ireo dia mifanaraka amin'ny MCCVB's Sustainable Moments Collective. Ny tanjon'ny fiaraha-miasa dia ny hizara fomba fanao tsara indrindra avy amina fandraisana andraikitra maharitra sy hananana hery miasa mangina avy amin'ny vondrona mba hahatratrarana ny mpitsidika sy ny mponina. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fandraisana andraikitra sy fiaraha-mientan'ny MCCVB MCCVB dia hita ao amin'ny SeeMonterey.com/Sustainable. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fiantraikany tsara dia mankanesa ao amin'ny PositiveImpactEvents.com. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny GDS-Index, mandehana mankany GDS-Index.com.
Miara-miasa amin'ny FITUR 2019 ny mpitarika ny fizahan-tany Karaiba
Rosia: fidirana tsy misy visa ho an'ny mpitsidika vahiny miaraka amin'ny 'Fan IDs' mifarana amin'ny 31 Desambra